खेलकूदको विकासको लागि के गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकूद नीति २०६७ पुनरावलोकन तथा खेलकूद विकास गुरुयोजना २०७५ को मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्न बिहीबार छलफल अघि बढाएको छ ।
७३ मिलियन खर्चेर लिभरपुलले भित्र्यायो गोलकिपर
एजेन्सी । इंग्लिस क्लब लिभरपुलले इतिहासकै महँगो मूल्य हालेर ब्रािजलियन गोलकिपर एलिसन बेकरलाई भित्र्याएको छ । ६ वर्ष एनफिल्डमा बस्ने गरी एएस रोमाका गोलकिपर एलिसनलाई लिभरपुलल् ७३ मिलियन युरो तिरेर भित्र्याएको हो ।
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखाले इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटमा सट्टेबाजी गर्ने नथमल अग्रवाल भनिने नागराजलाई जेल चलान गरेको छ ।
कहाँ के गर्दैछन् मोहम्मद सालह ?
एजेन्सी । रसिया विश्वकप इजिप्टियन खेलाडी मोहम्मद सलाहको लागि विशेष रहेन । च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा घाइते भएका सलाहले समूह चरणको पहिलो खेल खेल्न पनि पाएनन् ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्रीमा
एजेन्सी । गत हप्ता स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट इटालियन क्लब युभेन्टस् पुगेका पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो थुप्रै सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएका छन् ।